Maya. 2 Xagaaga 2017 | Abaalmarinta Abaalmarinta - Jacaylka, Galmada iyo Internetka
Bogga ugu weyn Maya. 2 XNISH XUM
Waxaan rajeynayaa inaad ku raaxeysaneyso xagaaga. Shaqaalaha TRF waxay ku mashquulsanaayeen diyaar garowga xilli ciyaareedka cusub oo ay la socdaan casharada dugsiga laga bilaabo 1da Sebtember, wadahadalada GP-yada iyo aqoon isweydaarsiyada. Waxaan qoreynay waraaqo, codsaneyno maalgalinta waxaanna la kulannay dad badan oo ka tirsan dowlada, maamulada maxalliga ah, ururada samafalka iyo warbaahinta kuwaas oo laga yaabo inay awoodaan inay gacan ka geystaan ​​sidii aan howlaheena horey ugu sii wadi lahayn. Waan kula socodsiin doonaa sida xiriirkaasi u kobcayo.
Cilmi-baaris: diiradda caafimaadka
Talo bixinta buugaagta
Abaalmarinta Abaalmarinta Dugsiyada
Na maqal adoo ka hadlaya Edinburgh
Shirka qoyska ee Croatia
Qaab cusub oo loogu talagalay Abaabulka Abaalmarinta
Ka hortagga xadgudubka caruurta ee Jarmalka iyo UK
On 28th July TRF wuxuu kaqeybgalay munaasabad tababar hal maalin ah oo ay soo saartay NOTA (Ururka Qaranka ee Daaweynta Abusers Scotland) oo ay lahadleen 2 sifiican uhadlaya. Marka hore wuxuu ahaa borofisar Klaus Beier (sawirka), khabiir caalami ah oo hormood ka ah kahortagga xadgudubyada galmada carruurta iyo naqshadeeyaha Mashruuca Ka Hortagga Dunkelfeld Jarmalka. Midda labaad waxay ahayd Professor Kieran McCartan, oo ah khabiir ku takhasusay jaamacadda Bristol oo baadhay jawaabaha mustaqbalka iyo mustaqbalka mustaqbalka ee la shaqeyn doona dembiilayaasha galmada ee UK iyadoo la eegayo casharada mashruuca Dunkelfeld. Eeg sheekadayada halkan.
Mary Sharpe, Sarkaalkayaga Sare ee Fulinta wuxuu ahaa wada-qoruhu 'feker' 'Kahortaga Dhaqanka Galmada ee Waxyeelada Galmada MAALIN, Ururka Qaranka ee Daaweynta Dadka Xadgudbayaasha ah. NOTA waa hay'ad samafal oo caawimaad siisa xirfadlayaasha la macaamilaya dembiilayaasha galmada. Falanqeyntan cilmi-baarista ee ugu dambeysay, Mary waxay ku biirtay koox UK oo dhan ah oo uu hogaaminayo Stuart Allardyce, Maareeyaha Qaranka ee Stop Stop Now! Iskotland. Waxaad ku arki kartaa sheeko tan halkan.
Sheyga aan u xushay wargeyskan ayaa la yiraahdaa Saameyntii Pornography ee Internetka ee Carruurta. Waxaa qortay Kuleejka Dhakhaatiirta Caruurta Mareykanka oo ah siyaasad qoraal ah oo taariikhi ah laga bilaabo Juun 2016.
Sheeko: Helitaanka iyo adeegsiga sawir-gacmeedka qaawan wuxuu ku dhowaaday meel kasta oo ka mid ah dadka waaweyn iyo dhalinyarada. Isticmaalka sawir-gacmeedka sawir-maskaxeedku wuxuu la xiriiraa natiijooyin badan oo xagga shucuurta, cilmu-nafsiga, iyo jir ahaaneed. Kuwaas waxaa ka mid ah heerarka murugada oo kordhay, walaaca, jilitaanka iyo dhaqanka rabshadaha, da'da yar ee bilowga galmada, dhillanimada galmada, halista sii kordheysa ee uurka dhalinyarada, iyo aragtida qaldan ee xiriirka ragga iyo dumarka. Dadka qaangaarka ah, filimada qaawan waxay u keentaa suurtagalnimada furiinka oo sidoo kale dhib u leh carruurta. Kulliyadda Dhakhaatiirta Carruurta ee Mareykanka waxay ku boorineysaa xirfadleyda daryeelka caafimaadka inay u gudbiyaan halista sawir-gacmeedka loo adeegsado bukaanka iyo qoysaskooda iyo inay siiyaan ilaha labadaba si looga ilaaliyo carruurta inay daawadaan sawir-gacmeedka iyo in la daaweeyo shakhsiyaadka la silcaya saameynteeda xun.
Waxaan jeclaan lahaa inaan ku taliyo buug waalid, macalimiin iyo xirfadlayaal. Nin, Kala Dhex Galay - Maxay Dhalinyartu U Halgamayaan & Maxaan Ka Qaban Karnaa waxaa iska leh Stanford Psychology Professor Philip Zimbardo iyo Nikita Coulombe. Waxay ku dhisantahay hadalka Professor Zimbardo ee 4 daqiiqo ee TED Diidmada Guys kaas oo ahaa lammaane la hadla xiriirka asxaabteyda Gary Wilson ee caanka ah TEDx Imtixaanka Porn Porn.
Qormada buuggu waa in aan la kulanno adduun aan addoon ahayn oo cusub; dunidii dhalinyaradu ay ka baxeen. Qorayaashu waxay yiraahdaan mukhaadaraadyada cayaaraha fiidiyowga iyo porno internetka ah ayaa abuuray jiilka xishoodka, bulsho ahaanna u jilicsan, dareenka laga saaro, iyo ragga khatarta xun leh ee aan awoodin (oo aan rabin) si ay ula socdaan dhibaatooyinka iyo khatarta ku jirta xiriirka dhabta ah ee nolosha , dugsiga, iyo shaqada. Qaadashada xaalad adag oo ku saabsan dhibaatada dillaaceysa qoysaska iyo bulshada meel kasta, Man, Qallafsan waxay soo jeedinaysaa in nimankayaga dhallinyaradu ay la il daran yihiin nooc cusub oo miyir-la'aan ah. Waxay soo bandhigaysaa qorshe cusub oo cad oo loogu talagalay inay dib ugu noqoto wadada.
Cutubyada gabagabada ah ayaa bixiya xalal xalaal ah oo saameeya qaybo kala duwan oo bulshada ka mid ah oo ay ku jiraan iskuulada, waalidiinta, iyo dhalinyarada naftooda. Waxaa la buuxiyey shuruudo muujinaya natiijooyinka, natiijooyinka cilmi-baarista xiisaha leh, falanqaynta garashada, iyo talooyinka dhabta ah ee isbeddelka, Man, Qallafsan waa buug loogu talagalay waqtigeena. Waa buug ku qoran, caqabadaha, iyo ugu dambeyntii dhiirrigeliya.
Labadii bilood ee la soo dhaafay waxaan wareysiinnay afar khabiir oo dheeraad ah.
Bishii Juun waxaan waraysannay Kenneth Cloggie, Edinburgh Qareenka dembiga sharaxidda nidaamyada waalidka iyo ilmuhu la kulmi karaan haddii lagu soo oogo dembi galmo. Wuxuu arkay kor u kaca dambiyada la xidhiidha dembiga internetka. Wareysigiisu wuxuu ka muuqan doonaa website-ka xilliga loogu talagalay.
Intii aan booqashada Australia bishii July waxaan sameynay wareysi daqiiqadeed ah 45 oo leh Liz Walker, oo hogaamineysa baraha jinsiga. Liz ayaa markii ugu horreysay u soo jiidatay sawir-siib darro badan ee baska dugsiga ee da'doodu tahay 6 sano jir. Iyada story akhris wanaagsan. Waxay sidoo kale la shaqaysaa la-dagaallanka ladagaallanka ladagaallanka ah Professor Gail Dines at Dhaqanka Weyn.
Dr Paula Banca (Sawirka hoose), a cilmi-baaraha neerfaha laga bilaabo Jaamacadda Cambridge waxay siisay fikrado faa'iido leh waraaqda cilmi baarista ee ay daabacday Cusbooneysiinta, qaboojinta iyo indha indheynta ku saabsan abaalmarinta jinsiga. Cilmi-baaristaan ​​aadka u wanaagsan ayaa la aqoonsaday markii ay ku guuleysatay Abaalmarinta Cilmi-baarista ee 2016 ee Ururka Horumarinta Caafimaadka Galmada.
Dib ugu noqoshada Scotland, waxaannu wareysi horudhac ah la samaynay Anne Chilton, Madaxa Tababarka Xirfadlaha ee Talo-siinta Xiriirka Is-bahaysiga Scotland si aad u barato habka tababarka loogu talagalay daaweynta jinsiga ee Scotland. Waxay sheegtay in ay hareer martay xirfadlayaal 30 ah oo hadda loo tababaray inay wax ka qabtaan lamaanaha iyo kor u kaca dhibaatooyinka caafimaadka galmada la xiriira. Waxay ka careysiisay sida yar ee gargaarka dhaqaale ee ka jirta Dawlada Scottishku dhibaatada sii kordheysa.
TRF ayaa bixin doonta fasalada ardayda Akadeemiyada Edinburgh, George Watson iyo St. Columba ee iskuulada Kilmacolm ee ku saabsan saameynta sawirada qaawan ee internetka ee caafimaadka, xiriirka, dambiyada iyo cilaaqaadka laga bilaabo 1da Sebtember. Waxaan sidoo kale la hadlaynaa waalidiinta iyo ardayda at George Watson ee Fikradaha Fikradaha ee Sebtembar iyo waalidiinta ee ardayda at Dugsiga Tonbridge, England ee Oktoobar sidoo kale.
13-ka Oktoobar waxaan cashar u siineynaa Bulshada Medico-Chirurgical ee Edinburghku saabsan saameynta sawir-gacmeedka internetka ee ku saabsan caafimaadka dhallinyarada. Jaaliyaddan ayaa ka doodaysa arrimaha caafimaadka ilaa 1821.
Kaalay oo nagula soo biir 16th Noofambar Sanctuary ee Kaniisada Augustine United, 41 George IV Bridge, Edinburgh, EH1 1EL markii Maamulaheena Mary Sharpe uu noqon doono afhayeenka ugu weyn ee qayb ka ah Xarunta Caalamiga ee Edinburgh ee Nabadgalyada iyo Nabadda iskaashi. Waxay ka hadli doontaa "Ruuxi ahaaneed, Naxariis iyo Balwad". Tan waxaa ku xigi doona dood cilmiyeed lala yeelan doono khubaro kale oo ay ka mid yihiin waalidka iyo ku xigeenka macallinka Audrey Fairgrieve, oo ay weheliyaan aabe iyo u ololeeyaha caafimaadka, Douglas Guest. Hadlayaasha waxaa soo jeedin doona Darryl Mead, oo ah Guddoomiyaha Hay'adda Abaalmarinta Reward.
Waxaanu bixin doonaa aqoon-is-weydaarsi ku saabsan xirfadlayaal caafimaad, barayaal iyo qareeno shirwayne sanadeedka Bulshada ee Horumarka Caafimaadka Galmada ee Salt Lake City on 5-7 Oktoobar. Magaca sanadkan waa Caafimaadka Galmada ee Dunida Dijital ah.
21 Oktoobar waxaan ka hadli doonnaa sannadlaha shirarka qoyska ee Zagreb, Croatia cinwaankeedu yahay "Qoyska, Iskuulada: Furaha Xorriyadda ka Qaadista Maandooriyaha". Waxtarkayagu wuxuu ku bilaabmi doonaa muxaadaro rasmi ah subaxa hore waxaanan hogaamin doonnaa aqoon isweydaarsiga maalinta dambe.
Waxaan dhawaan ka bedelnay "maskaxdeena jacaylka iyo jinsiga" ka dib "The Reward Foundation", "jacaylka, jinsiga iyo internetka". Fikradda waa in la badiyo xoojinta internetka iyada oo aan laga hadlin erayga "porn". Waxaan wali diiradda saareynaa baridda nidaamka abaalmarinta maskaxda. Dadka qaarkiis waxay ogaadeen in ereyga "maskax ahaan" wax yar ka dhigista, aqoonta hore ee jiritaanka daawada ama neurosiyaanka ayaa loo baahan yahay si loo akhriyo alaabtayada. Tani ma aha kiiska.